Komi Ma Sheegi Karo Taariikhda Siideynta, Meesha Laga Daawado + Wax Badan - Aragtida Cradle
Komi ma sheegi karo taariikhda la sii daayo
Leave a Comment on Komi ma sheegi karo taariikhda la sii daayo, halka laga daawado + wax badan
Komi Can't Communicate waa laqabsiga cusub ee Anime ee Manga caanka ah ee loo yaqaan "Komi-san wa, Komyushō Desu" waxaana lagu wadaa in lagu sii daayo goob caan ah dhawaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikhda la sii daayo Komi Ma xiriiri karto, jilayaasha, halka aad ka daawan karto, iyo in ka badan. Markaa haddii aad xiisaynayso Komi iyo sheekadii ku xeeran dabeecadeeda ka dib fadhiiso oo naso inta aan ku buuxino faahfaahinta.
Dulmar - Komi ma xiriiri karto
The Komi Can't Communicate Anime wuxuu leeyahay cinwaan is sharraxaad ah oo qurux badan daawadayaasha intooda badan. Waxay ku saabsan tahay gabadh yar oo dhigata dugsiga sare oo aan u hadli karin sida carruurta kale ee fasalkeeda. Laakin ujeedadu waxay tahay in dadkaan aysan hadli karin ama aysan hadlin, macnaheedu maaha in aysan rabin. Tan waxaa lagu qeexay trailer-ka rasmiga ah ee siideynta oo aad ka daawan karto halkan:
Waxaan u maleynayaa in sheekada guud ee sheekadu ay tahay mid muhiim ah oo runtii aan jeclahay fikradda. Waxa kale oo lagu dari lahaa ayaa noqon lahaa Komi waxa ay u muuqataa in ay tahay gabadh aad u soo jiidasho badan tanina waxa ay ku soo kordhin doontaa dabeecadeeda firfircoon mar haddii aanay hadli karin. Runtii waan helay barta Anime-ka waxaanan u maleynayaa inay noqon doonto mid aad u weyn marka la sii daayo.
Jilayaasha ugu muhiimsan - Komi ma xidhiidhi karo
Markaa marka hore, dabcan, waanu haysanaa Komi Shouko, ardayga soo jiidashada leh ee dugsiga sare oo xishoodka laakiin shakhsiyadiisa aan waxba galabsan ayaa tan siinaysa Naadi gariirkeeda. Way qurux badan tahay oo caqli badan, iyada oo aan la xusin a weyn dabeecadda ugu weyn.
Waxay lahayd timo siman oo madow iyo xariir leh oo dheer oo garbaheeda hoos u socda. Waxay xidhataa direyska dugsiga dhaqanka ee dugsiga sare ee ay dhigato.
Welwelkeeda iyo kalsooni la'aanteeda asal ahaan waxay ka dhigaan wax aan macquul ahayn inay ku hadasho oo ay dadka kale ula hadasho si caadi ah oo bulsho ahaan loo wada xidhiidho, oo ka duwan asaageeda.
Marka labaad, waxaan leenahay Tadano Hitohito, oo isku dugsi dhigta Komi oo waliba fasalkeeda ayay ku jirtaa.
Ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ayaa ku tilmaamay “Tadano-kun waa fulay xishood badan” - tani ma noqon karto sida ugu fiican ee loo dhigo, laakiin waxaan arki karnaa sida inta badan fasalka uu u arko isaga.
Wuxuu ku dhow yahay 5'7 gudaha Naadi muuqaal ahaanna wuu yar yahay. Waxa uu leeyahay timo madow oo gaaban sidoo kale iyo nooc u eg oo la mid ah Komi dhinacyada qaar.
Wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa horumarinta sheekada Komi Ma xiriiri karto.
Goorma ayay Komi la xidhiidhi la'dahay Premier?
Komi Ma xiriiri karto ayaa lagu wadaa in la sii daayo 21-ka Oktoobar. Waxaa jiri kara dib u dhacyo ay ugu wacan tahay arrimaha shatiga laakiin guud ahaan waxaa loo arkaa mid cusub Naadi u iman doona shashadaha loogu talagalay dhagaystayaasha reer galbeedka on the 21-kii Oktoobar 2021.
Iyadoo la sii daayay trailer-ka rasmiga ah ee Anime Hype iyo trailer kale oo uu sameeyay Netflix, buunbuunin tan Naadi waa horeba halkaas. Hubi inaad diyaar u tahay inaad daawato Komi Ma xiriiri karto adiga oo iska diiwaan gelinaya liiska iimaylkayaga.
Sideen u daawan karaa in aanay Komi la xidhiidhin karin?
Goobta qulqulka leh ee leh xuquuqda muujinta Komi Ma xiriiri karto waa Netflix hadda. Waxaad ka daawan kartaa halkan: https://www.netflix.com/search?q=komi%20&jbv=81228573
Netflix waxaad mooddaa in loo wakiishay Naadi wax yar ka dib, iyo version hoosaadka ayaa diyaar ah. Su'aasha ah Netflix sidoo kale sii deynta dub si qurux badan ayaa loo dejiyay, way yeeli doonaan. Waxay u sameeyeen kuwo kale oo badan Muuqaalada iyo xataa Naadi kuwaas oo aan xitaa u qalmin dub. Waxaad ka filan kartaa ugu yaraan Isbaanishka ama Faransiiska inuu ku raaco wax yar, ama aad joogtid marka la sii daayo.
Waxaan sidoo kale qiyaasi in Naadi si weyn iyo si guul leh ayaa loo budhcad-badeed noqon doonaa. Markaa suurtogalnimada inaad ka heli karto goobo kala duwan oo daawashada ah waxay noqon doontaa mid sare (eeg annaga: 10ka Goobood ee ugu Wanaagsan Anime Streaming article wixii macluumaad dheeraad ah. )
Salaantii Ugu Dambaysay
Tani waxayba u muuqataa mid qurux badan oo gaar ah oo kor loo qaaday Naadi. Iyada oo tiro badan oo taageero ah ay horeba u soo qulqulayeen ka hor siideynta rasmiga ah ee ugu horreysa ee Anime. Tani xaqiiqdii waxay noqon doontaa mid la dhacsan inta badan taageerayaasha Anime waana hubaa taas Komi Ma xiriiri karto waxay noqon doontaa taageere ay dad badan jecel yihiin Naadi taageerayaasha. Sidoo kale kan Komi Ma xiriiri karto Anime wuxuu arkay a weyn korodhka tirada iibka ee Manga.
Iibso badeecado iyo taageer View Cradle
Gelitaan Hore Demi Rose Mawby waxay ku soo bandhigtay muuqaal la yaab leh oo ku soo dheji Instagram Post sexy ah
Gelitaanka Xiga Demi Rose Mawby oo qof walba uga naxday muuqaal qaawan oo Instagram ah